पात्र भर्सेज पात्रहरु
समृद्धि शायद, (काठमाण्डौ)
बिर्सनै लागेको धुमिल तस्विर फेरि सम्झनाहरुको हुल बोकेर विनिर्माण गर्न आइपुग्यो । शुशिल कुनै चलचित्रको नायक झै व्यवहार आचरण र निभाउने क्रियाकलाप पनि । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
"म तिम्रो लागि जे पनि गर्न सक्छु"
"जस्तो कि…। !" म जिज्ञाशापूर्ण आँखा ऊ तर्फ तेस्र्याउछु
"पैसा वाहेक सबै"
उस्ले आफ्नो शब्दहरुमा "सवै" लाई विशेष जोड दियो र म पैसामा अड्किए ।
अभावले पनि प्रेम जन्मन्छ र ! जन्माउनु पर्दोरहेछ अवस्थामा परेपछि । बेरोजगार युवक स्नातक उत्तिर्ण र आकर्षक पनि छ । धेरै पल्ट लिखित उत्तिर्ण गरेर अन्तरवार्तामा फ्याकिएको नमिठो अनुभवको टुक्राटाक्री सुनाउँछ । साँच्चै भनुँभने मैले मेरो जीवनको वृत्तमा ल्याउन नचाहेको पात्र हो । र पनि घरिघरि कुइनेटो बनेर ठोक्किन आइपुग्छु । मोवाइलमा मिसकल दिनु, गीतका लाइनहरु एस एम एस गर्नु र रोमान्टीक हुनु उसको विशेषता तर उस्लाई थाहा छ म उसको उमेरमा ओर्लन सक्तिन । मेरो उमेरले मलाई प्रौढताका बस्त्र ओढाइ सक्यो फेरिपनि उसको व्यवहार उही रहन्छ । "सिनेमा हेर्न जाउ न" लाई थेगो बनाइसक्यो । सँगै चार पाइला हिड्न पाउनु मात्र पर्छ उँचाइ नाप्नको बहानामा छेउमा आइपुग्नु बानी बनाइसक्यो ।
"म बीस वर्षको भन्ठानेको तिमीले !"
मेरो रिसको पारो चढ्छ । हिड्दाहिड्दै पछाडी छोडिदिन्छु । अब त पिछा छोड्ला भन्ठान्यो तर के छाड्नु ! आइपुगि हाल्छ आँखा अगाडि टुप्लुक्क । कस्तो थेतर मन विसिद्धिको बानी, इख नभाको मान्छे…… यिनै कुराहरुको मेसो फुकाउछु पत्रकार साथीसंग । ऊ झन् उस्तै - 'ल ! ल !! छ !! छ !!! लेख न लेख यिनै हुन् तिम्रा श्रृजनाहरुको पात्र' भन्छ उल्टो । मन अमिलो भएर आउँछ । एउटा सिङ्गो मान्छेलाई कसरी पात्र बनाउनु । उस्को अभावले जन्माएको म प्रतिको प्रेमलाई विषयवस्तु बनाइदिनु । सम्पादक मित्रको प्रतिक्रिया सम्झन्छु 'सुटुक्क दिएको म्यादपनि सकिन लाग्यो।' अर्थात कथा पठाउन ढिला भइसक्यो ।
शुशिललाई पहिलोपटक मैले आफ्नो कार्यक्षेत्रको निरिक्षण गरेर फर्कदा बाटोमा चिनेकी थिएँ । एन.जि. ओ. को जागिरे भनेपछि प्रायशःको मुखबाट निस्कने 'वाह डलर !' उसको मुखबाट फुत्केको थियो । उसका साथीहरु अघि अघि र शुशिल मसँग गफको मेसो लाउदै पछि पछि । साथीहरु गिज्याउँदै थिए - ल ! केटा गरिखा …॥' । सँगसगै फर्कने क्रममा मेरो सम्पर्क नं. माग्या माग्यै गरेपछि 'छैनू' भनेर टारँ । घरछेउ आइपुग्दा पनि फर्कने छाँटकाँट नदेखेपछि 'तिम्रो मोवाइल नं. देउ म फोन गरुँला' भन्न बाध्य भएँ । मैले आफ्नो ब्याकप्याकबाट नोटबुक के निकाल्न मात्र आँटेकी थिएँ चलचित्रको रोमान्टिक हिरो झै खल्तीको डटपेन निकालेर मेरो देब्रे हत्केलामा लेखेर अध्यारोमा बिलिन भएको थियो । यसरी भएको कयौ भेटहरु बिर्सिने हुदोरहेछ । मैले पनि बिर्सिएँ उसलाई । तर जब एकसाँझ मैले शुशिललाई त्यही ठाउँभन्दा पर चिया पसलबाट निस्किएर मेरो सामुन्ने उभिएको पाएँ फेरि बितेका क्षणहरु फ्ल्यासब्याक बनेर आइपुग्यो । अनि सुरु भयो हाम्रो खिचातानी भेटनु र तर्कनुको पछ्याउनु र भाग्नुको ।
अफिसको काम सकेर आइपुगेको थाकेर हैरान मन शरिर विसाएको पनि थिइन हेमको फोन आएको थाहा पाएँ । पुन ः फर्केर उहि बिगतमा पुगे । अचम्म लाग्यो किन हेमको अहमले ओरालो लागेछ । मन खुशी र चोटको दोसाँधमा राखेर फोन गर्न थालेँ । आखिर कुरा उहिँ अर्थ अभावमा आएर अड्कियो । महिनौ अघि टुकि्रएको हाम्रो सम्वन्ध फेरि अभावले जोडिन आइपुग्यो । भाई हस्पिटलको बेडमा दुई दिन पछि अप्रेशन अनि पैसा सापटीमा गएर कुरोले मेसो लाग्यो । जुन अभावले हेमलाई मसँगबाट अर्कोको पोल्टोमा पारेको थियो त्यहीँ अभावले फेरि फर्कायो । हारजितको निकासाबाट त्यही सम्वन्धलाई निष्कर्षमा पुर् याइयो । अप्रेशन भएको रात म हेम सँगै एउटै ओढ्ने ओडेर बेन्चमा बसेकी थिए । थाहा छैन ! उसको स्पर्श प्रेमपूर्ण थियो वा बाध्यताले गाँजेको । दुवै चुपचाप चुपचाप त्यसै वखत उसको मोवाइल बज्यो । अरु कुरा सामान्य भएपनि 'नरिसाउ म भोली फोन गर्छु । मंगलबारसम्म हो अनि सँधै अनलाईनमा रहन्छु ।' बाट थाहा लाग्यो ऊ अर्को पोल्टा रहेछ । भोली पल्ट बिहान जब म हेमसँग चिया पिउन क्यान्टीनमा पुगेँ उसको हातमा पाँच हजार रुपैया राखेर चियाको कप झै रित्तोपना बोकेर फर्किएँ । दिउँसो उसको भाइ डिस्चार्ज भएर कोठा पुगेको खबर पाइपुग्यो एस.एम.एस. बाट । र धन्यवाद पनि मैले गरेको सहयोगको लागि ।
'धन्यवाद जरुरी छैन । म पनि तिम्रो स्पर्शबाट नाफाबाट नाफामानै रहेको छु । फेरि पनि अफ्ठेरो परे सम्झनुहोला ।' भनेर जवाफ फर्काएँ । एस.एम.एस. गर्दा बखत मेरो पत्रकार साथी अगाडी बसेर खुशी हुँदै थियो । हिजो भर्खर हाम्रो यात्रालाई २१औं डेटिङ्ग भन्दै अर्को साथीलाई गर्वसाथ सुनाउँदै पनि थियो । मोवाइलमा कुराकानी सकिए पछि मतिर ध्यान केन्द्रित गर्दै -
"आज तिम्रो अनुहार फ्रेस देख्छु नी ! हिजो भन्दा आज खुशी देखिन्छु । के कुरा छ हँ ?"
"तपाई आज भोली के लेख्दै हुनुहुन्छ" मैले कुरा मोडेँ । सामान्य कुरैकुरामा नै उसले कुरा फुत्कायो कि उपन्यासको लेखाई चलिरहेछ । मैले विषयवस्तु सोधँ औपचारिकतावश । पछि भनौँला भनेर कुरा चपायो । पत्रकार न पर्यो न शत्रुता ठिक न मित्रता नै । मित्रहरुको व्यक्तिगत संवाद पनि बाँकी नराख्ने शत्रुहरुको पिछापनि नछोड्ने । भएपनि उ भित्रको मीठास बेग्लै छ । हमेसा हँसाइ राख्छ पिडा कहिल्यै सोध्दैन । थाहा भएर पनि पिडा पोतिएको छ मुखमा र पनि आज किन फ्रेस हँ ! भनि बस्छ । उसलाई के थाहा उसकी उपन्यासकी यो पात्रले हाँसो झुण्ड्याएर ओठमा बाँचेकी छ । एउटा पात्र बनेर उसलाई पनि आफ्नो सृजनाको पात्र बनाउँदै छ । मेरो पत्रकार साथी पात्रले थाहा नपाओस भनेर आवश्यकता भन्दा बढी अभिनय गर्छ । कहिलेकाँही प्रेम पोखेजस्तो पनि गर्छ । कहिले उपन्यासको लागि वातावरण तयार गर्छ । आज अन्तिम दिन मैले कथा पठाउनु पर्ने । फेसबुकमा सम्पादक मित्रको खुला पत्र आइसक्यो 'सुटुक्क थपेको म्याद पनि सकिन लाग्यो' भनेर । रातभर कथाका लागि आफैलाई अक्षरभरि केरिरहेँ । आँशुसँगै झारीरहँ, आफुलाई अर्को उपन्यासमा पात्र बनाई उभ्याएँ । अरुलाई सम्वन्धलाई कथामा उतारेँ । बिहानको अर्लामसँगै सन्तोषको सास फेरेँ । आज कथा लेखिसकियो । एउटा स्रष्टा हुनुको विजयीभाव महशुश गरें । कम्प्यूटर खोलेर फटाफट किबोर्डमा औलाहरुलाई दौडाएँ । मानौ त्यो कथा मैले समयमा नपठाए अर्कोले पठाउनेछ । त्यसपछि इमेलमा अट्याचमेन्ट गरि सम्पादक मित्रलाई पत्र टाइप गरे ।
विषयवस्तु थिएन र बेफुर्सदी अलि बढि नै भएकोले ढिलाई हुन गयो । क्षमा चाहन्छु । फेरि पनि मौका दिनुहोला ।" र इमेललाई सेन्ड गरे ।
हिजो देखि बन्द रहेको मोवाइल स्वीच अन गरेपछि ट्वाकट्वाक मोवाइलमा पेण्डिङ्ग रहेको म्यासेज आइपुगेको घण्टिले जनाऊ दियो । खोलेर हेरे लेखेको रहेछ -
"पलभर के लिए कोही हमेँ प्यार करले झुठा ही सही |"